काठमाडौं उपत्यकाका यी ७१ ठाउँमा छन् २९० संक्रमित (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितको संख्या २९० पुगेको छ । जसमध्ये काठमाडौंमा १९१, ललितपुरमा ५६ र भक्तपुरका ४३ जना रहेका छन् ।
कोरोनाबाट ललितपुरका दुईजना र काठमाडौंका एकजनाको मृत्यु भइसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंका ३५, भक्तपुरका ८ र ललितपुरका २ जना डिस्चार्ज भएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा सोमबार ५४ जना, मंगलबार २८ जना र बुधबार २३ जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ । उपत्यकाका ७१ ठाउँमा संक्रमित भेटिएका छन् ।
पछिल्ला तीन दिन भेटिएका १ सय ५ जना संक्रमितको ठेगाना विश्लेषण गर्ने हो भने टोलटोलमा कोरोना संक्रमण फैलिएको देखिन्छ । ईडीसीडीका अनुसार आइतबारसम्म उपत्यकाका १२ ठाउँका स्थानीयमा ट्राभल हिस्ट्री नै नभएको पाइएको छ ।
याे पनि पढ्नुस आइतबार थपिए १५६ कोरोना संक्रमित
स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का निर्देशक डा. बासुदेव पाण्डेले केही सातायता काठमाडौंमा संक्रमणको धेरै केस देखिएको बताए । कोरोना प्रभावित मुलुकबाट उद्धारका क्रममा स्वदेश फर्किएका व्यक्तिका कारण संक्रमितको संख्या बढेको डा. पाण्डेले बताए ।
काठमाडौं उपत्यका कोरोनाको हटस्पट हुने खतरा बढ्दै भएको छ । पछिल्ला केही दिनयता काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्न थालेको छ र दैनिक संक्रमितहरू थपिँदैछन् । कतै नगएका व्यक्तिमा समेत संक्रमण बढ्न थालेकाले स्वास्थ्य सतर्कता नअपनाए ‘ठूलो जोखिमको सामना गर्नुपर्ने’ चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस नेपालमा १५-२० दिनमा सङ्क्रमण भयावह हुन सक्ने
संक्रमित देखिएका ७१ स्थानः